तपाईले बहुत जटिल प्रश्न गर्नु भयो--नगर प्रमुख वीरेन्द्र प्रसाद यादव,माधव नारायण नगरपालिका
अन्तरवार्ता 31 पटक पढिएको प्रेमचन्द्र झा क्रान्तिद्वार दैनिक
सडक ढलान गर्नु पहिले हामी नाला निर्माण गरी रहेको छौं
माधव नारायण नगरपालिकाका नगर प्रमुख वीरेन्द्र प्रसाद यादवको नेतृत्वमा नगर क्षेत्रमा विकासका योजनाहरु तीब्र गतिमा अगाडी बढी रहेका छन । नगर प्रमुख यादवको घर भएको वडा नम्बर १ बाट सबै सडक नालालाई व्यवस्थित गरी सफा सुन्दर बडा बनाउँदै क्रमशः सुन्दर नगर सफा नगर बनाउने अभियानका साथ काम भईरहेका छन । नगर मापदण्ड अनुसार मुल सडक र टोल टोलमा फराकिलो एप्रोच सडक निर्माण गर्ने काम थालनी गर्नुहुने नगर प्रमुख वीरेन्द्र राय यादवसंग क्रान्तिद्वार दैनिका सम्पादक प्रेमचन्द्र झाले गर्नु भएको अन्तरवार्ता प्रस्तुत छ ।
० नगरमा विकासका काम कसरी अगाडी बढेका छन ?
माधवनारायण नगरपालिकामा सहभागिता मुलक हिसाबले द्रुत गतिमा विकासको काम अगाडी बढी रहेका छन । अहिलेको परिपेक्षमा सडक नाला निर्माण गराउनु साधारण काम होइन । सडक नाला निर्माणको काम अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रहेका छन ।
सडक नालाको काममा हात हाल्नु फलामको चिउरा चपाउनु जतिकैको गाह्रो काम हो ।
जनताको बीचमा गई सम्झाई बुझाई गरेर हरेकर्ला सडकको आवश्यकता बुझाएर विनम्रतापूर्वक आग्रह गरी यो सडक आफनै लागि हो । साँधुको सडकका कारण हुने क्षेत्री दुर्घटनालाई न्यूनिकरण गर्नका खातिर सडक चौडीकरण गर्नु जरुरी हो । पहिलेको तुलनामा गाडीको संख्या धेरै बढेका छन । गाडीको चापको तुलनामा सडक विस्तार आवश्यक छ ।
सडक विस्तारको काम कानूनी रुपले समेत जटिल हो । कानूनी वाधा अडचनलाई चिरेर जनताको हितलाई सर्वोपरी ठानेर जनतासंग पटक पटक सहमति वार्ता गरी काम अगाडी बढाएको छु ।
सहमतिले धेरै घर सार्ने काम भएका छन । घर सानै काम जारी नै रहेका छन । माधवनारायणको दिपही सखुअवामा हेर्न सकिन्छ । हामीले शहरी विकासको मापदण्ड अनुसार काम गरी रहेका छौं ।
शहरी विकासले ३ क्याटोगोरीका सडक राखेका छन । ३०, २५ र १६ फिट त्यसका हुबहु अनुसरण हामीले गरेका छौं । त्यसै अनुरुप यहाँ कामहरु अगाडी बढी रहेका छन ।
तपाईहरु हेर्न सक्नु हुन्छ । एकदम नमुनाको रुपमा काम भईरहेको छ । यस्तो काम दिपहीमा हेर्न सक्नु हुन्छ । मेनरोड ३० फिट बाटो, आरसीसी नाला ढलान गराई रहेको छु । करिब ७ सय मिटर आरसीसी नाला ढलान भईरहेका छन । यसमा ५ मिटर ढलान सम्पन्न भई सकेका छन । ढलान सम्पन्न गरी एक सय पचिस मिटर आरसीसी ढलान बाटो जसको चौडाई पचिस मिटर रहेका छन । काम सम्पन्न हुने अवस्थामा छ । मेन रोडमा जोडने सडकलाई २० फिट ढलान गर्ने योजना छ ।
सडक ढलान गर्नु पहिले हामी नाला निर्माण गरी रहेको छौं । नाला निर्माण गरी पानीको समुचित विकास गरी मात्र सडक ढलान गर्ने योजना छ । १६ फिटबाला सडकमा पनि सर्वप्रथम नाला बनाएर सडक ढलान गर्ने योजना छ । यो रोड नालाको काम भयो । यसको अलावा रोड नालाको मात्र विकास गरेर त भएन हरेक क्षेत्रमा विकास गर्नु परयो ।
० शिक्षाको क्षेत्रमा के भईरहेको छ ?
माधवनारायण नगरपालिकामा सबै भन्दा बढी शिक्षाको क्षेत्रमा विकास गर्न जरुरी देखिरहेको छु । जहाँ जाँदा प्रायः सबै जसो विद्यालयबाट शिक्षक अभाव भएको गुनासो पाए । हामीले त्यसका लागि नगरपालिकाबाटै १६ जना शिक्षकको व्यवस्था गरी खटाउने काम भएको छ । पठन पाठन राम्रो संग संचालन होस भने अपेक्षा सहित सबै विद्यालयमा राम्रो संंग विद्यार्थीलाई शिक्षा दिने कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउँदै छु ।
० माधवनारायण नगरपालिका विकासको नगरपालिका भनेर चिनिएका छ । कृषिको क्षेत्रमा के के काम भईरहेका छन ?
कृषिका लागि हामीले खेत खेतमा सिचाई सुविधा पुरयाउने उद्देश्यले विद्युतिकरणको काम ५ वर्षको मास्टर प्लान बनाएर गराई रहेको छ । यस अवधिमा कुनै पनि एरिया विद्युतबाट बंचित हुने छैन । केही नयाँ ४१ मिटरको नाया डेन निर्माण भई भएको छ । नाला प्लास्टरको काम गरी पानी चुहिने अवस्थाबाट मुक्त गराइएको छ ।
दिपही खेसरहीया र सखुअवा तिनवटै गाउँलाई फाइदा पुरयाउने साँझ नहरबाट व्यवस्थित सिचाईका लागि काम गराइएको छ ।
सिपविकासमा के के काम भईरहेको छ ?
एउटै वर्षमा सबै थोक गर्न सम्भव नभए पनि हरेक वर्ष केही केही व्यक्तिलाई सीप दिँदै जाने हो ।
यस वर्ष ४५ जना महिलालाई नगरपालिकाद्धारा नगरको बजेटमा ३ महिने सिलाई कटाई तालिम दिईरहेको छु । ४५ जना महिलालाई सिलाई कटाईको सिप दिई रोजगारीमा लैजाने हामे चाहना हो ।
धारा मर्मत गर्ने तालिम शुरु भएको छ । १५ जनालाई प्लम्बीगंको कामको सीप दिईदै छ । उनीहरुलाई धारा बनाउने सीप दिएर आत्म निर्भर बनाउने काम गरिएको छ । यसरी नै धेरै विकासका योनजा एक साथ अगाडी माधव नारायण नगरपालिका भरी नै संचालनमा आएका छन ।
तपाईले शिक्षाको लागि काम गरी रहेको बताउनु भएको । १६ शिक्षक राख्नु भएको छ।
पढाई भएको नभए विद्यालयमा शिक्षक आएको न आएको तपाई आफैले कति पटक हेर्न जानु भएको छ ?
विद्यालयमा नियमित अनुगमन भईरहेको छ । हामीले वडाबाट पनि गराएका छौं । सबै वाडा अध्यक्षलाई आ आफना गाउाका विद्यालयमा शिक्षक आएको नआएको, पढाई भएको नभएको हेर्न भनेको छु । हाम्रो यहाँ निकै कार्य व्यस्तता छ । तैपनि हामीले समय समयमा अनुगमन निरीक्षण गरी रहेको छौं । कुन कुनै विद्यालयमा समयमा नआउने शिक्षकको हाजिरी कटा गरी चेतावन िसमेत दिने गरेको छु
० नगर क्षेत्रमा यतिका विकास काम थालनी गर्नु भएको छ । यसमा आम जन समुदायसंग् कस्तो किसिमको सहयोगको अपेक्षा गर्नु भएको छ ?
जनतासंग सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा राखेको छ । हामी सकारात्मक सोचका साथ नगरको विकासमा जुटेका छौं । विकास निर्माणको काममा अवरोध नगर्नुस कुनै पनि विकास कार्यको मुल उद्देश्य जनतालाई नै फाइदा पुरयाउनु हो । माधवनारायण नगरपालिकावासी हरेक जनतासंग हात जोडेर म अनुरोध गर्दछु ।
जुन काम नगरपालिकाबाट भई रहेको छ । त्यसमा तपाईहरु सहयोग गर्नुहोस । तपाईहरुको विकासको लागि कार्यक्रम भई रहेको छ । विकासको कामलाई सफलतामा पुरयाउन पुनः हात जोडेर सम्पूर्ण नगरवासीसंग् अनुरोध गर्दछु । काम हुन दिनुस । बाधा पुरयाउने काम नगर्नुस यही अनुरोध छ ।
० काममा पारदर्शीता सुशासनका लागि के गर्नु भएको छ ?
यहाँ जुन ठाउँमा पनि माधव नारायण नगरक्षेत्रमा जे सुकै काम भई रहेको छ । सबै नगरवासी संग अनुरोध गर्दछु । काम खराब भयो पछि गुनासो गर्नु भन्दा पहिले नै काम राम्रो छ भने ठीक भन्नुस । यदी कमी कमजोरी छ भने मलाई भन्नुस । तत्काल सुधार भएको अनुभूति गराउनछु । योजना स्थल मै गएर कामको क्वालिटी, क्वान्टीट िचेक गर्नुस । स्टीम डिजाईन अनुसार कहि कमीकमजोरी छ भने काम तत्काल रोकी दिनुस । नगरपालिका तुरुन्त सुनुवाई गर्दछ । नगरपालिका विकासको काम प्रति प्राप्त हुने गुनासो सुन्न ठाउँ ठाउँमा टोल फ्रि नम्बरको प्रचार प्रसार गरेका छन । तपाई एक कल फोन गर्नुस । काममा कमि कमजोरी पाएको गुनासो गर्नुस । खराब काम हुन दिने पक्षमा हामी छैन । फोन गर्दा जनताको पैसा लाग्दैन निःशुल्कको व्यवस्था गरको छ । खराब कामको बारेमा जानकारी प्रधान गरी नगरको विकासमा सहयोग पुरयाउने हरेक नगरवासीसंग अनुरोध छ ।
० पारदर्शीता र सुशासनका लागि समान्य काम रौतहट जिल्लाको अधिकास स्थानीय तहको योजना स्थलमा होडीगं बोर्ड नलगाई काम गरी रहेको पाइएको छ । यसमा माधव नारायण नगरपालिका जिल्लाको अन्य पालिका जस्तै छ की केही फरक छ ?
योजना स्थलमा होडिगं बोर्ड लगाउने काम एकदम जरुरी हो। माधव नारायण नगरपालिकामा नलागेको होइन । तर सबै योजना स्थलमा लागेको छ भन्ने स्थिति पनि छैन, समयको व्यवस्ता या अन्य कुने कमी कमजोरीले २।४ ठाउँमा न लागेको हुन सक्छ । तर उपभोक्ता समितिका सबै पदाधिकारीहरुलाई होडिगं बोर्ड लगाउन आग्रह गरी सकिएको छ ।
० तपाईले चुनावको बखत जनता बीच गरेको प्रतिबद्धता कतिको पुरा गरेको जस्तो लाग्छ ? तपाई आप्mनो स्वः मूल्यांकन मा के भन्नु हुन्छ ?
तपाईले बहुत जटिल प्रश्न गर्नु भयो । हामीले जनता बीच गरेको प्रतिबद्धतामा सत प्रतिशत प्रतिबद्ध छु । हामी योजना त्यसै किसिमले राखेका छौं । जस्तो योजना तीन किसिमको हुन्छ । छाटो अवधि, मध्यम अवधि र लामो अवधिको जुन लामो समय लाग्ने योजना छ । त्यसलाई लामो समयमा गर्न चाहेको छु । छिटो अवधि बाला योजनामा हामी धेरै नै अगाडी छौं । जनतालाई गरेको प्रतिबद्धता भन्दा बढी काम गरेर देखाई सकेको छु ।
हरेक ठाउँमा पुगी रहेको छ । माधव नारायण नगरपालिकाबाट जुन काम भईरहेको छ । क्वालिटी र क्वान्टीमा कुने सम्झौता छैन । यसमा गर्वका साथ म भन्न चाहन्छु । तपाई पत्रकार मित्रहरु कहि कुनै पनि योजना गएर हेर्न सक्नु हुन्छ ।
काम गरेको छु । प्रचारप्रसार भएको छैन । अलग विषय हो । हाी कामलाई महत्व दिएका छौं । खाली प्रसार प्रसार गरेर भएन । काममा बढी जोड दिएको छु। प्रचार प्रसारमा जोड दिएको छैन ।
० अन्तमा यो संचार माध्यमबाट माधवनारायण नगरवासी सम्पूर्ण देशवासीमा के सन्देश दिन चाहनु हुन्छ ?
माधव नारायण नगरवासी र सम्पूर्ण नेपालीवासीलाई यही सन्देश दिन चाहन्छु कि माधव नारायण नगरपालिकाले जुन काम गरी रहेको छ । एकदम गुणस्तरीय, प्रभावकारीकाम गरी रहेको छन । ५० वर्षको भविष्यलाई लक्ष्य लिएर काम गरी रहेको छु । हामीले आप्mनो अवधिमा गरेको काम आउने ५० वर्ष सम्म चलोस । त्यो स्तरको काम भएका छन ।
सम्पूर्ण नगरवासी देशवासीसंग यही अनुरोध छ कि यस काममा सबैलाई सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछु । मिडियाका मित्रहरुलाई समय समयमा योजना स्थलमा गई रेखदेख गरी प्रचार प्रसार गरी दिन अनुरोध गर्दछु । आफूले माधवनारायण नगरपालिकालाई रौतहट जिल्लाको नमुना नगरपालिकाको रुपमा बनाउन चाहि रहेको छु ।
1485539	Times Visited.